Doorashada Archives - HalQaran.com
DAAWO VIDEO: Qalbi Dhagax oo farriin xasaasi ah oo la xiriirta doorashada soo saaray
Muqdisho (Halqaran.com) - Cabdikariin Muuse (Qalbi Dhagax) oo shalay soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa hadal uu jeediyey wuxuu ugu mahadceliyay xukuumadda ra’iisul wasaare Rooble...
AKHRISO: Liiska guddiga doorashada Puntland iyo Jubbaland
Garoowe (Halqaran.com) – Dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo dhankooda uu ku harsanaa soo Magacaabista Guddiyada doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed ayaa ugu dambeyn xalay...
HalQaran Staff - January 22, 2021
Muqdisho (Halqaran.com) - Madaxweynayaasha maamul goboleedyadda ayaa xalay yeeshay kulan dhanka teleefanka kadib dadaallo ay waday maalmihii lasoo dhaafay beesha Caalamka oo ku aadana...
DHAGEYSO: Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Somaliya aan la kala gooyn karin, ‘‘Gobol ka tirsan Soomaaliya cid aqoonsaneyso ma jirto‘‘
HalQaran Staff - September 27, 2020
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxweynaha JF Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo marti ku ahaa dood cilmiyeed uu soo agaasimay Machadka Raas ee Falanqeynta...
Daawo Sawirro: Muxuu hoggaamiyaha Jubbaland kala hadlay Xildhibaanada labada aqal ee uu kula kulmay Kismayo
HalQaran Staff - August 15, 2019
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), ayaa maanta Aqalka Madaxtooyada Kismaayo ku qaabilay Xildhibaanada Labada Aqal ee Baarlamaanka...
AKHRI: Doorashada Madaxweynaha cusub ee Jubbaland oo waqtigeeda laga soo hormariyay, Ogow xilliga laqabanyo!
HalQaran Staff - August 14, 2019
Kismaayo (Halqaran.com) - Guddiga madaxa bannaan ee xudduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ayaa maanta isbaddel ku sameeyay jadwalka doorashada Maamulkaas. Qoraal uu soo saaray guddiga ayaa...
IGAD oo war ka soo saartay kulamadii Kismaayo ay kula yeelatay dhinacyada Jubbaland, (Ogow xog..)!
HalQaran Staff - August 8, 2019
Kismaayo (Halqaran.com) - Ergayga gaarka ah ee Urur gobaleedka IGAD u qaabilsan Soomaaliya iyo Badda Cas oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Kismaayo...
XOG: Maraykanka oo doonayo in doorashada Jubbaland ay nabad ku dhacdo +(Ogow Sababta)
Muqdisho (Halqaran.com) – War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa aad loogu taageeray doorashada maamul goboleedka Jubbaland. War-saxaafadeedkan ayaa soo saaray...